Shariif Xasan oo la filaayo inuu iclaansho inuu yahay Musharax Madaxweyne. – idalenews.com
Shariif Xasan oo la filaayo inuu iclaansho inuu yahay Musharax Madaxweyne.
Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa la filaayaa inuu si rasmi ah ugu dhawaaqo inuu yahay musharax u taagan jagada Madaxweynenimada Soomaaliya maalinta Axada (August 12 2012) . Waxaana isugu yeerey taageeroyaal iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo ololaha doorashadiisa ka qeyb ah si uu uga waramo qorshaha waxqabadkiisa haddii uu ku guuleysto hogaanka ugu sareeya ee dowladda Somalia.
Waqti sii horeysey oo wareysi Gudoomiyaha Barlamaanka siiyey Laanta Af Somaliga ee BBC sheegey inuu diyaar-garow ugu jiro ka qeybgalka tartanka doorasahada Madaxtinimada dalka xaqna u leeyahay inuu xilkaas isu soo taago laakiin waxuu meesha ka saarey in doonaayo in mar kale isu soo taagi doono jagada Gudoomiyaha Barlaamanka.
Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa iyagu si rasmi ah u sheegey iney yihiin musharaxiin u tartameysa Madaxtinimada Soomaaaliya waxay Muqdisho ka wadaan ololaha aad u balaaran oo ay rabaan iney ku kasbadaan taageerada xubnaha barlamaanka cusub, waxaana sidoo kale jira musharaxiin kale oo aad u tiro badan oo tirada guud ee musharaxiinta ka dhigeysa in ka badan 29 musharax oo iyuguna olale ka wada caasimada.
Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa qaba in Shariif Xasan in soo galistiisa barlamaanka ay tahay in uusan haysan taageero ku filan oo u sahli karta inuu la tartamo madaxda sare ee dowlada sida mida Ra’iisul Wasaare Abdiweli iyo Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo iyagu haysta kalsoonida inta badan xubnaha kala duwan ee beelaha Soomaalida halka Guddoomiyaha Barlamaanka laga yaabo inuu ka haysto taageero kooban oo dhanka xildhibaanada beelaha Digil iyo Mirifle maadaama uu galaangal ku lahaa ka mid ahaanshahooda barlamaanka cusub ee Somalia. Siyaasiyiintaasi oo sidoo kale aaminsan in qorshaha Sharif Xasan ee jagada Madaxweynaha aysan meel dheer gaarsiisneyn, isla markaasna yaabo inuu ka haro tartankaas ka hor inta aan la iclaamin doorashada gudoonka barlamaanka, ka dibna isu bedelo tartamayaasha gudoomiyaasha barlamaanka.
Kulanka Shariif Xasan Sheekh Aadan kaga dhawaaqi doono inuu yahay musharax ayaa ka dhici doona guri ku yaala agagaarka halkii la oran jiray shineema Nasar ama dhabarka dambe xarunta Golaha Shacabka, waxaana laga dhowrayaa inuu ka warbixiyo isbedelka iyo waxqabadka dadka Soomaaliyeed sugayaan haddii uu ku guuleysto tartanka madaxtinada Soomaaliya.
Madaxweyne Sharif oo weli sii wada magacaabista degmooyin cusub iyo Golaha Wasiiradu diidmo ka muujiyey arrinkaas